လူပြောများနေတဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်က ညဉ့်ငှက်မလေးအကြောင်း - APANNPYAY
/ လူပြောများနေတဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်က ညဉ့်ငှက်မလေးအကြောင်း
လူပြောများနေတဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်က ညဉ့်ငှက်မလေးအကြောင်း
အချိန်ကား ည၈ နာရီဖြစ်၏။မိုးသည် သည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေသည်။ကျော်ဆွေက ဂျစ်ကားလေးကို မိုးစက်မိုးပေါက်များ ကြားတွင် သတိထားပြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်း လေးမောင်းလာခဲ့လေသည်။ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီး ပေါ်၌ မီးထိုးမောင်းနှင်လာသော ကုန်ကားကြီးများကို မကြာခဏ ရှောင်ရသည်မှလွဲလို့ လမ်းမှာ လူသွားလူလာ ပြတ်နေသည်။တောင်ငူ ဘူတာကြီးသို့ လာကြိုရန် မိခင်ကြီးထံမှ ဖုန်းဆက်ထားသဖြင့် ညနေစောင်းထဲက အိမ်မှထွက်လာခဲ့သော်လည်း အပေါင်းအသင်းများနှင့် တွေ့ရာ ပိုင်အိုနီးယားသို့ ဝင်လိုက်ရသေးသည်။မိုးသည် တစ်နေကုန်စွေပြီး စိုစွတ်အေးမြနေသောကြောင့် ဘီယာ အရှိန်လေးတင်ပေးရလေ၏။တစ်အောင့်လောက်ကြာတော့ နာရီကိုကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းများကို နှုတ်ဆက်ကာ ထိုဆိုင်မှထွက်ခွာခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ကျွန်းကုန်းရွာလေးကို လွန်သည်နှင့် လူနေအိမ်ခြေများ မရှိတော့ဘဲ ရွာဆက်ပြတ်သွားသည်။
ကားမီးရောင်သည် လမ်းမပေါ်သို့ မီးတစ်ရိုက်အကွာအဝေး လောက် လင်းဖြာသော်လည်း မိုးစက်မိုးပေါက်များကြောင့် မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေကာလမ်းဘေးနှစ်ဘက် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခွင်လုံးမှာလဲ မဲမှောင်နေလေ၏။ မြို့သစ်မှ တောင်ငူသို့ (၁၃) မိုင်ခန့် ဝေးသော်လည်း ကျော်ဆွေက ဒီလမ်းခရီးကို သွားနေကျ ဖြစ်၍ စိတ်ပူပင်မှု တစ်စိုးတစ်စိမျှ မရှိပေ။ကားအရှိန်ကို လျော့၍ သံလမ်းကုန်းကို ကျော်ပြီးချိန်တွင် စိတ်ထဲ ချမ်းစိမ့်စိမ့် ဖြစ်လာ၍ ဂျင်းအင်္ကျီအိပ်ကပ် ထဲမှ စီးကရက်ဘူးကို ထုတ်ပြီး စီးကရက် တစ်လိပ်ကို ထုတ်ယူ မီးညှိ ရှိုက်ဖွာလိုက်လေ၏။မီးညှိပြီးကားရှေ့သို့အကြည့်မီးရောင်အောက်တွင် လူတစ်ယောက် ကိုဘွားကနဲ တွေ့လိုက်ရာ ဘရိတ်ကိုဆောင့်နင်းချလိုက်ရလေ၏။ ကားဘီးတို့သည် စိုစွတ်နေသည့် ကတ္တရာ လမ်းကိုပွတ်တိုက်ရင်း ကျွီ ကနဲ ထိုးရပ်သွားလေတော့သည်။ လေကြီးမိုးကြီးထဲတွင် ကတ္တရာလမ်းပေါ်၌ ကားနှင့် လေးငါးပေခန့် အကွာလောက်တွင် ခြေစုံရပ်နေသည့် မိန်းကလေး တစ်ဦး ဖြစ်၏။
မိုးရေများ ရွှဲစိုနေသည့် အဝတ်အထည်တို့က ခန္ဓာကိုယ်ကို ကပ်နေရာ ပေါ်လွင်နေသော တင်အစုံနှင့် မို့မောက်နေသော ရင်အစုံတို့က ကားမီးရောင်ကြောင့် အထင်းသားပေါ်လွင်နေလေ၏။အုံထူ၍ ရှည်လျားသော ဆံနွယ်တို့က မျက်နှာတစ်ဖက်ခြမ်းကို မိုးစက်မိုးပေါက်တို့နှင့်အတူဖားလျားကျနေလေ၏။ကျွန်းကုန်းနှင့်နတ်စင်ကုန်း ကြားရှိ ထိုနေရာ တစ်ဝိုက်သည် မကြာခဏ အခြောက်အလှန့် နေရာဖြစ်ကြောင်း ကြားဖူးရာ ကျော်ဆွေလဲ ချီတုံချတုံ ဖြစ်သွားလေ၏။သို့ရာတွင် မိန်းကလေးက ခိုက်ခိုက်တုန်စွာဖြင့် ကားဆီသို့ လှမ်းကြည့်နေလေ၏။ ကျော်ဆွေလဲ ရုတ်တရက် ကြောင်နေရာမှ ကြောက်စရာ မဟုတ်ဘူးဟု စိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ကာ ကားတံခါးကိုဖွင့်၍ ထီးဆောင်းပြီးဆင်းလေတော့၏။ " ဟေ့ မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ ။ကားတစ်စီးလုံးလာတာ မမြင်ဘူးလား " ဟု အော်မေး လိုက်ရာမိန်းကလေးသည် ကားမီးထိုးထားသည့်ဘက်သို့ လက်ကလေးကွယ်ရင်း နောက်သို့ဆုတ်လိုက်သည်။ထို့နောက် တစ်ဟင့်ဟင့်နှင့် ရှိုက်ငိုနေကာကျော်ဆွေအား မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ကြည့်နေလေ၏။ " ငါမေးနေတာ မကြားဘူးလား။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တည်း ဒီနေရာမှာ အချိန်မတော်ကြီး၊ မင်း ဘယ်ကလဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ " ဟုထပ်မံအော်ရင်း ကျော်ဆွေက မိန်းကလေး အနားသို့ တိုးကပ် သွားမိရာ မိန်းကလေးမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်အောင် ချမ်းနေသည်ကို တွေ့ရလေတော့သည်။ ကျော်ဆွေ ကြည့်နေရင်း မိန်းကလေးမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း အရပ်ရှည်ထွက်လာသည်။
ထန်းတစ်ပင် ခန့် ရှည်ပြီး နီရဲနေသော မျက်လုံးမှာလဲ သပိတ်လုံး အရွယ် ရှိ၏။ကျော်ဆွေ ကြက်သေသေ ပြီး တစ်ခဏမျှ ကြောင်ကြည့်နေမိလေ၏။ ထို့နောက် ကျော်ဆွေလဲ သတိပြန်ဝင်လာပြီး ကားဆီသို့ ပြေးလေတော့သည်။ ကားတံခါးကိုဖွင့် ကားစက်နှိုးပြီး အသားကုန် မောင်းလေတော့၏။ ထို့နောက် မိခင်ကြီးကို ကြိုပြီး (၁၃) မိုင်ခန့် ဝေးသော မြို့သစ်သို့ ပြန်ခဲ့ကြလေ၏။ အပြန်လမ်း၌ ညကခြောက်ခံထိသောနေရာ ၌ ထိုမိန်းကလေးကို အမှတ်တမဲ့ တွေ့လိုက်ရသေးသည်။ဘေးမှာ မိခင်ရှိနေသောကြောင့် ဟန်ဆောင်နေရသော်လဲ ညက ပုံရိပ်တွေ မျက်လုံးထဲကမထွက်ပေ။ ထိုညက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဖြစ်အပျက်နှင့် မိန်းမချော ညဉ့်ငှက်မလေး အကြောင်း ပြန်မြင်ယောင်နေမိရာ တော်ရုံနှင့် အိပ်မပျော်ခဲ့ပါ။ နောက်တစ်ခါ အဲ့ဒီဘက်ကို တစ်ယောက်တည်း မသွားတော့ပါဘူးဗျာ။သွားခဲ့သည်ရှိသော် ခုစာဖတ်နေသူကို အဖော်အဖြစ် ခေါ်သွားပါရစေ.. လိုက်မှာလား ???
အခြိနျကား ည၈ နာရီဖွဈ၏။မိုးသညျ သညျးသညျးမဲမဲ ရှာနသေညျ။ကြျောဆှကေ ဂဈြကားလေးကို မိုးစကျမိုးပေါကျမြား ကွားတှငျ သတိထားပွီး ခပျဖွညျးဖွညျး လေးမောငျးလာခဲ့လသေညျ။ရနျကုနျ-မန်တလေး ကားလမျးမကွီး ပျေါ၌ မီးထိုးမောငျးနှငျလာသော ကုနျကားကွီးမြားကို မကွာခဏ ရှောငျရသညျမှလှဲလို့ လမျးမှာ လူသှားလူလာ ပွတျနသေညျ။တောငျငူ ဘူတာကွီးသို့ လာကွိုရနျ မိခငျကွီးထံမှ ဖုနျးဆကျထားသဖွငျ့ ညနစေောငျးထဲက အိမျမှထှကျလာခဲ့သျောလညျး အပေါငျးအသငျးမြားနှငျ့ တှရေ့ာ ပိုငျအိုနီးယားသို့ ဝငျလိုကျရသေးသညျ။မိုးသညျ တဈနကေုနျစှပွေီး စိုစှတျအေးမွနသေောကွောငျ့ ဘီယာ အရှိနျလေးတငျပေးရလေ၏။တဈအောငျ့လောကျကွာတော့ နာရီကိုကွညျ့ပွီး သူငယျခငျြးမြားကို နှုတျဆကျကာ ထိုဆိုငျမှထှကျခှာခဲ့ခွငျး ဖွဈ၏။
ကြှနျးကုနျးရှာလေးကို လှနျသညျနှငျ့ လူနအေိမျခွမြေား မရှိတော့ဘဲ ရှာဆကျပွတျသှားသညျ။ကားမီးရောငျသညျ လမျးမပျေါသို့ မီးတဈရိုကျအကှာအဝေး လောကျ လငျးဖွာသျောလညျး မိုးစကျမိုးပေါကျမြားကွောငျ့ မှုနျဝါးဝါး ဖွဈနကောလမျးဘေးနှဈဘကျ ပတျဝနျးကငျြ တဈခှငျလုံးမှာလဲ မဲမှောငျနလေေ၏။ မွို့သဈမှ တောငျငူသို့ (၁၃) မိုငျခနျ့ ဝေးသျောလညျး ကြျောဆှကေ ဒီလမျးခရီးကို သှားနကြေ ဖွဈ၍ စိတျပူပငျမှု တဈစိုးတဈစိမြှ မရှိပေ။ကားအရှိနျကို လြော့၍ သံလမျးကုနျးကို ကြျောပွီးခြိနျတှငျ စိတျထဲ ခမျြးစိမျ့စိမျ့ ဖွဈလာ၍ ဂငျြးအကငြ်ျီအိပျကပျ ထဲမှ စီးကရကျဘူးကို ထုတျပွီး စီးကရကျ တဈလိပျကို ထုတျယူ မီးညှိ ရှိုကျဖှာလိုကျလေ၏။မီးညှိပွီးကားရှသေို့အကွညျ့မီးရောငျအောကျတှငျ လူတဈယောကျ ကိုဘှားကနဲ တှလေို့ကျရာ ဘရိတျကိုဆောငျ့နငျးခလြိုကျရလေ၏။ ကားဘီးတို့သညျ စိုစှတျနသေညျ့ ကတ်တရာ လမျးကိုပှတျတိုကျရငျး ကြှီ ကနဲ ထိုးရပျသှားလတေော့သညျ။
လကွေီးမိုးကွီးထဲတှငျ ကတ်တရာလမျးပျေါ၌ ကားနှငျ့ လေးငါးပခေနျ့ အကှာလောကျတှငျ ခွစေုံရပျနသေညျ့ မိနျးကလေး တဈဦး ဖွဈ၏။မိုးရမြေား ရှဲစိုနသေညျ့ အဝတျအထညျတို့က ခန်ဓာကိုယျကို ကပျနရော ပျေါလှငျနသေော တငျအစုံနှငျ့ မို့မောကျနသေော ရငျအစုံတို့က ကားမီးရောငျကွောငျ့ အထငျးသားပျေါလှငျနလေေ၏။အုံထူ၍ ရှညျလြားသော ဆံနှယျတို့က မကျြနှာတဈဖကျခွမျးကို မိုးစကျမိုးပေါကျတို့နှငျ့အတူဖားလြားကနြလေေ၏။ကြှနျးကုနျးနှငျ့နတျစငျကုနျး ကွားရှိ ထိုနရော တဈဝိုကျသညျ မကွာခဏ အခွောကျအလှနျ့ နရောဖွဈကွောငျး ကွားဖူးရာ ကြျောဆှလေဲ ခြီတုံခတြုံ ဖွဈသှားလေ၏။သို့ရာတှငျ မိနျးကလေးက ခိုကျခိုကျတုနျစှာဖွငျ့ ကားဆီသို့ လှမျးကွညျ့နလေေ၏။ ကြျောဆှလေဲ ရုတျတရကျ ကွောငျနရောမှ ကွောကျစရာ မဟုတျဘူးဟု စိတျကို ဆုံးဖွတျကာ ကားတံခါးကိုဖှငျ့၍ ထီးဆောငျးပွီးဆငျးလတေော့၏။ " ဟေ့ မငျးဘာလုပျနတောလဲ ။ကားတဈစီးလုံးလာတာ မမွငျဘူးလား " ဟု အျောမေး လိုကျရာမိနျးကလေးသညျ ကားမီးထိုးထားသညျ့ဘကျသို့ လကျကလေးကှယျရငျး နောကျသို့ဆုတျလိုကျသညျ။ထို့နောကျ တဈဟငျ့ဟငျ့နှငျ့ ရှိုကျငိုနကောကြျောဆှအေား မကျြနှာငယျလေးနှငျ့ ကွညျ့နလေေ၏။ " ငါမေးနတော မကွားဘူးလား။ မိနျးကလေး တဈယောကျတညျး ဒီနရောမှာ အခြိနျမတျောကွီး၊ မငျး ဘယျကလဲ ဘာလုပျနတောလဲ " ဟုထပျမံအျောရငျး ကြျောဆှကေ မိနျးကလေး အနားသို့ တိုးကပျ သှားမိရာ မိနျးကလေးမှာ တဆတျဆတျ တုနျအောငျ ခမျြးနသေညျကို တှရေ့လတေော့သညျ။
ကြျောဆှေ ကွညျ့နရေငျး မိနျးကလေးမှာ တဈဖွညျးဖွညျး အရပျရှညျထှကျလာသညျ။ထနျးတဈပငျ ခနျ့ ရှညျပွီး နီရဲနသေော မကျြလုံးမှာလဲ သပိတျလုံး အရှယျ ရှိ၏။ကြျောဆှေ ကွကျသသေေ ပွီး တဈခဏမြှ ကွောငျကွညျ့နမေိလေ၏။ ထို့နောကျ ကြျောဆှလေဲ သတိပွနျဝငျလာပွီး ကားဆီသို့ ပွေးလတေော့သညျ။ ကားတံခါးကိုဖှငျ့ ကားစကျနှိုးပွီး အသားကုနျ မောငျးလတေော့၏။ ထို့နောကျ မိခငျကွီးကို ကွိုပွီး (၁၃) မိုငျခနျ့ ဝေးသော မွို့သဈသို့ ပွနျခဲ့ကွလေ၏။ အပွနျလမျး၌ ညကခွောကျခံထိသောနရော ၌ ထိုမိနျးကလေးကို အမှတျတမဲ့ တှလေို့ကျရသေးသညျ။ဘေးမှာ မိခငျရှိနသေောကွောငျ့ ဟနျဆောငျနရေသျောလဲ ညက ပုံရိပျတှေ မကျြလုံးထဲကမထှကျပေ။ ထိုညက တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ အဖွဈအပကျြနှငျ့ မိနျးမခြော ညဉျ့ငှကျမလေး အကွောငျး ပွနျမွငျယောငျနမေိရာ တျောရုံနှငျ့ အိပျမပြျောခဲ့ပါ။ နောကျတဈခါ အဲ့ဒီဘကျကို တဈယောကျတညျး မသှားတော့ပါဘူးဗြာ။သှားခဲ့သညျရှိသျော ခုစာဖတျနသေူကို အဖျောအဖွဈ ချေါသှားပါရစေ.. လိုကျမှာလား ???